Barbados Inoparadzana neRoyal Britain: Inotaridzika KuAfrica |
Location: musha » Kutumira » Nyika | Dunhu » Barbados » Barbados Inotyora neRoyal Britain: Inotaridzika KuAfrica
Mufananidzo nerubatsiro rweNT Franklin kubva kuPixabay
Munguva pfupi yapfuura pakati pehusiku paNovember 30, nyika yechitsuwa cheBarbados yakagura hukama hwayo hwekupedzisira neBritain yekoloni uye ikava republic kumumhanzi wekupembera wemabhendi endarira uye madhiramu esimbi eCaribbean. Mambokadzi Elizabeth II, uyo ane makore makumi mapfumbamwe nemashanu asingachafambi kunze kwenyika, akamiririrwa nemwanakomana wake uye mugari wenhaka, Muchinda Charles, Muchinda weWales, aitaura se "muenzi anoremekedzwa".
Muchinda uyu akagovana mukurumbira nenyeredzi yechiratidziro, Rihanna, muimbi akaberekerwa kuBarbados uye muzvinabhizimusi uyo ane mukurumbira mukurumbira wenzvimbo. Akagamuchira zita reNational Hero kubva kuMutungamiri Mia Amor Mottley, pasi pehutungamiriri hwake Barbados yakatora danho rekupedzisira kubva pakorona kunyangwe kudaidzira kuti paitwe referendamu.
Musarudzo yenyika muna Ndira 19, yakadanwa mwedzi gumi nemisere isati yapera temu yake yekutanga pachigaro, Mottley, mukadzi wekutanga kuve mutungamiriri weBarbados, akatungamira Bato rake reBarbados Labour Party kune yechipiri, kukunda kwemakore mashanu. nguva muHouse of Assembly, kamuri yepasi muParamende yeBarbadian. Vhoti yaive yakasimba: bato rake rakatora zvigaro zvese makumi matatu, kunyangwe mamwe marudzi aive akaoma.
"Vanhu verudzi urwu vataura nezwi rimwe chete, zvine hungwaru, nekubvumirana uye zvakajeka," akadaro mukutaura kwake kwekupemberera kusati kwaedza muna Ndira 20. Kunze kwemuzinda webato rake, vatsigiri vake vanofara - vakafukidzwa, sezvakaita munhu wese munzvimbo dzeveruzhinji muBarbados. - aipfeka maT-shirt matsvuku aiti, "Gara wakachengeteka naMia."
Nyika inenge ichinzwa zvakawanda kubva kwaari. Runyerekupe rwekuti akasvikirwa neMunyori Mukuru weUN, António Guterres kuti atore chipangamazano chepasi rose panzvimbo yake, akarambwa nehofisi yaMottley, iyo yakati mutungamiriri wehurumende "haazive chero chiitiko chingaenderana nemamiriro ezvinhu. makuhwa awakabvunza nezvawo."
Barbados haisiriyo yekutanga yaimbova koloni yeBritish kudzikisa mureza wehumambo, zvichipedza basa rehumambo, rave kunyanya mhemberero, rekugadza gavhuna-mukuru weyaimbova koloni. Barbados yakazvimiririra muna 1966 mushure memazana emakore ehutongi hwemakoloni. Kusvika zvino, yakanga yachengeta hukama hwayo hwehumambo.
Ino inguva, zvisinei, apo zvinoda kutenderera kutsva kwekutsanangudza uye pakupedzisira kubvisa zvakasara zvekoloni zviri kuwana simba munyika dzichiri kusimukira. Mottley, makumi mashanu nenhanhatu, ishasha yechikonzero ichi, apo anoongorora kugona kusati kwaitwa mukugadzira hukama hwakasimba neAfrica.
Pasi rose, iyo "decolonization" yekutsvagisa kurapwa uye hutano hweveruzhinji, semuenzaniso, inyaya yakawedzera mudenda reCovid. Panguva imwecheteyo, inodaidzira kuti "decolonization" yenyaya dzepasirese inoda kuti sarudzo dzepasirese dzepasirese hadzifanirwe kuve kodzero yemasimba makuru.
Mumusangano chaiwo wevatungamiriri vakati wandei vemuAfrica neCaribbean munaGunyana, Mottley akashandisa musimboti wekubvisa koloni kumutsiridza nekusimbaradzwa kwetsika yeAtlantic kubatsira kukunda nhaka inoparadza yeuranda.
“Tinoziva kuti iri ndiro ramangwana redu. Apa ndipo patinoziva kuti tinofanira kutakura vanhu vedu,” vanodaro. “Nyika yenyu [Africa] musha wemadzitateguru edu uye tine hukama nemi nenzira dzakawanda nekuti Africa yakatitenderedza uye matiri. Hatisi kungobva kuAfrica.
“Ndinokumbira kuti tizive kuti chinhu chekutanga chatinofanira kuita, kupfuura zvimwe zvese . . . ndiko kuzviponesa kubva muuranda hwepfungwa - huranda hwepfungwa hunoita kuti tione Maodzanyemba chete; huranda hwepfungwa hunoita kuti titengesere Maodzanyemba chete; uranda hwepfungwa hunoita kuti tirege kuziva kuti pakati pedu tinoumba chikamu chimwe muzvitatu chemarudzi enyika; uranda hwepfungwa hwakadzivisa kutengeserana kwakananga links kana kufambisa mhepo zvakananga pakati peAfrica neCaribbean; uranda hwepfungwa hwakatitadzisa kuwanazve mugumo wedu weAtlantic, wakaumbwa mumufananidzo wedu uye zvinofarirwa nevanhu vedu.”
Vazukuru vevaranda vemuAfrica, akadaro, vanofanirwa kushanyira nyika dziri kumativi ese eAtlantic uye nekuvandudza tsika dzakagovaniswa, kusvika pakudya kwavanofarira. "Vanhu veCaribbean vanoda kuona Africa, uye vanhu vemuAfrica vanofanirwa kuona Caribbean," akadaro. “Tinofanira kushanda pamwe chete, kwete kuita zvido zvevashandi vehurumende kana kuti vanhu vatiunza kuno tisingadi. Tinofanira kuzviita sechisarudzo, senyaya yezvehupfumi. "
Mumeseji yake yeZuva reKisimusi ya2021 kune maBarbadians, Mottley aive akawedzera, achitsvaga basa renyika diki "rakarova pamusoro pehuremu hwayo."
Barbados iri padhuze nepamusoro mukukura kwevanhu munzvimbo huru yeLatin America-Caribbean, nharaunda yakanaka yevakadzi nevasikana. Nezvimwe zvisizvo - Haiti inomira pachena nekutadza kwayo kwakashata - nharaunda yeCaribbean ine rekodhi yakanaka.
Muna 2020, United Nations Development Program's Human Development Report (yakavakirwa padata ra2019) yakaverenga kuti tarisiro yehupenyu hwevakadzi pakuzvarwa muBarbados yaive makore makumi masere neshanu, zvichienzaniswa ne80.5 yevakadzi mudunhu rese. MuBarbados, vasikana vanogona kutarisira kusvika kumakore gumi nemanomwe edzidzo iripo kubva paudiki kusvika padanho repamusoro, zvichienzaniswa nemakore gumi nemashanu mudunhu. Mwero wekurava nekunyora wevakuru veBarbadian unopfuura 78.7 muzana, mbiru yedemokrasi inotsigirwa.
Achitarisa kunze kubva paakatora chigaro muna 2018 kekutanga mukukunda musarudzo dzepakati-kuruboshwe kweBarbados Labor Party, Mottley akagadzira chimiro chakasimba chepasirese. Kero yake yakaoma kwazvo kuUN General Assembly munaGunyana uye kushoropodzwa kwenhaurirano dzemamiriro ekunze epasi rose (ona vhidhiyo pazasi) zvakakwezva kutarisa kwekutaura kwake kwakasimba uye kugona kumutsa vateereri. Asi iye mutungamiri wenyika inenge chikamu chimwe muzvina saizi yeLondon metropolitan, ine vagari vangangoita 300,000, vakaenzana neiyo yeBahamas.
"Tinopedza gore rino, 2021, tatyora zvisungo zvekupedzisira zvehutongi hwedu hwekare, tichigumisa hutongi hwakagara kwemakore mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nematanhatu," akadaro mumashoko ake eKisimusi kurudzi. "Takazvizivisa isu seParamende Republic, tichibvuma mutoro wakazara wezvatiri uye pamusoro pezvimwe zvese, nekuisa wekutanga weBarbadian Head of State munhoroondo yedu." Sandra Prunella Mason, aimbova gavhuna-mukuru, gweta reBarbadian, akatoreswa mhiko muna Mbudzi 396 semutungamiri wekutanga wenyika.
"Tinoenda kumberi, shamwari dzangu, nechivimbo," Mottley akadaro mumharidzo yake. “Izvi ndinotenda kuti huchapupu hwekukura kwedu sevanhu uye senyika yezvitsuwa. Zvino, tave pamusuwo wegore ra2022. Takatsunga kutangazve rwendo rwekuenda kuBarbados kuti ive yepasi rose panosvika 2027.
Hupfumi hweBarbadian hwakadzoserwa kumashure nekurasikirwa panguva yedenda remuhoro wakakosha kubva kushanya kwepamusoro-soro, asi mutungamiriri wehurumende anoti vafambi vave kutanga kudzokera kumashure. Central Bank yeBarbados inofanotaura kuti kushanya kuchapora zvizere panosvika 2023.
Mottley akasununguka pachikuva chikuru. Akagara muLondon neNew York City, ane dhigirii remutemo kubva kuLondon School of Economics (nechisimbiso pakureverera) uye mumiriri webhawa muEngland neWales.
Nhoroondo yekutanga yeBarbados pasi pehutongi hweBritain yakanyura mumazana emakore ekushandiswa nekusuwa. Pasina nguva mushure mekunge varidzi vevhu vekutanga vachena vatanga kusvika muna 1620s, vachidzinga vanhu veIndigenous kubva munyika yavo, chitsuwa chakava nzvimbo yekutengeserana kwevaranda muAfrica muWestern Hemisphere. Britain nenguva isipi yakatonga kutengeserana kweAtlantic uye yakavaka hupfumi hwenyika hutsva, hwakabudirira kune veBritish vepamusoro kumisana yevaAfrica.
Varidzi veminda yeBritain vakanga vadzidza kubva kuvaPutukezi neSpanish, avo vakanga vaunza basa revaranda panzvimbo dzavo dzekoloni muma1500s, kuti hurongwa hwacho hwakanga huri pundutso sei nekushanda kwemahara. Muminda yeshuga yeBarbados, yaishandiswa pachiyero cheindasitiri. Mumakore ose apfuura, mazana ezviuru zvevaAfrica vaingovawo zvavo chattel, vanyimwa kodzero pasi pemitemo ine utsinye yorusaruraganda. Uranda hwakabviswa muumambo hweBritain muna 1834. (Hwakapedzwa munyika dzose dzokuchamhembe kweAmerica pakati pa1774 na1804, asi kwete muSouth kutozosvikira 1865.)
Nyaya yeuranda muBarbados inotaurwa mubhuku ra2017 rakanangana nekutsvagisa kwehunyanzvi kuzere nekuratidzwa kwehupenyu hweAfro-Caribbean: "The First Black Slave Society: Britain's 'Barbarity Time' muBarbados 1636-1876." Munyori, Hilary Beckles, munyori wenhoroondo akaberekerwa kuBarbados, mutevedzeri wemukuru weYunivhesiti yeWest Indies, iyo yakaburitsa bhuku.
Beckles anga ari mutsigiri anotungamira wekutsiva kweuranda anogara achifadza veBritish elite, London vezvemari uye masangano avakagadzira kubva mupurofiti yeuranda. Kugadzwa kweBritish hakuna kungotadza kugadzirisa, anopikisa, asi zvakare haana kumbotaura chokwadi kuvanhu veBritish nezve kutyisa kwehupenyu hweAfro-Caribbean.
Muchinda Charles, mukutaura kwake kwaNov. 30 pakugamuchidzwa kwechisaririra chekupedzisira chesimba rehumambo kuRiphabhuliki itsva, akataura zvishoma nezvekutambudzika kwemazana emakore kwevaranda vemuAfrica uye akatarisa pane ramangwana rakanaka reBritish-Barbados. ukama.
"Kubva pamazuva akasviba ekare, uye hutsinye hunotyisa hweuranda, hunosvibisa nhoroondo yedu, vanhu vechitsuwa ichi vakagadzira nzira yavo nekusimba kunoshamisa," akadaro. “Kusununguka, kuzvitonga uye kuzvimirira ndizvo zvawakanga uri. Rusununguko, kururamisira uye kuzvisarudzira vanga vari vatungamiri vako. Rwendo rwako rurefu rwakusvitsa panguva ino, kwete sekwauri kuenda, asi senzvimbo yekutarisa kubva pauri kuwongorora mamiriro matsva. "
Chekutanga chakapihwa naBarbara Crossette, mukuru anobvunza mupepeti uye munyori we PassBlue uye mutori wenhau weUnited Nations weThe Nation.
Africa bhangi Barbados Caribbean kisimusi Economics England Haiti Latin London United Nations